Fihetsehampon’ny Ethiopiana Anaty Fiaraha-Mifaly na Fiaraha-Miory, Tsikera Tamin’ny Famotsorana ireo Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jolay 2015 4:58 GMT
Petaka Free Zone9 Bloggers, miely fatratra ao amin'ny Twitter.
Tamin'ny Avrily 2014, Nofonjain'ny governemanta Ethiopiana ny mpikambana enina ao amin'ny Zone 9 bloggers sy ny mpanao gazety telo ao amin'ny firenena goavana indrindra amin'ny fangejana blaogera sy mpanao gazety. Taorian'ny fisamborana azy ireo dia nampangaina araka ny Fanambarana 2009 iadiana amin'ny fampihorohoroana, drafi-dalàna nahazo ny fanohanan'ny governemantan'i Etazonia, natao hikendrena ireo andian-jiolahy tahaka ny Al Shabaab ao amin'i Tandrok'i Afrika, ireo blaogera sy ireo mpanao gazety. Lasa fitaovana politika avy eo ilay lalàna, natao hanagadràna mpanao gazety tahaka an'i Eskinder Nega sy Reeyot Alemu.
Nosintonina ireo vesatra niampanga ny blaogeran'ny Zone9: Zelalem Kiberet, Tesfalem Waldyes, Asmamaw Hailegiorgis, Mahlet Fantahun ary Edom Kassaye ary navotsotra avokoa izy dimy ireo. Mpikambana efatra nanorina ny vondrona kosa no mbola hiatrika ny vesatra ao an-tranomaizina. Ireto avy izy ireo: Befeqadu Hailu, Natnael Feleke, Atnaf Berahane ary Abel Wabela.
Navotsotra ihany koa tamin'ny zoma lasa teo ny mpanao gazety Reeyot Alemu izay nampangaina ihany koa tamin'io lalàna io tamin'ny 2011.
Nampiseho ny tsi-finoany i Bilena, namana akaikin'ny blaogeran'ny Zone9, tamin'ny fandrenesana ny vaovao ato amin'ity sioka manaraka ity :
Mihinjaky ny hafaliana sy ny tsi-finoana aho!!! dimy minitra miala an'i Tesfalem no misy ahy. Hahita azy aho tena marina ve izao???
Miteraka fifangaroharoam-pihetsehampo amin'olona maro ny tsy fahafantarana izay mahazo ny sisa amin'ireo mpanaogazety sy bilaogeran'ny Zone9. Mahlet Solomon, mpandrindra ny fitia tsy mba hetra ho an'ny Zone9, izao dia sady nampiseho fifaliana no nampiseho alahelo :
NIeritreritra fa nihinjaky ny hafaliana aho, fa tsy faly ihany koa aho ary manahy rehefa mahatsapa fa ny fianakavian'i Natty, Abel,…
Mpisolovava Ethiopiana Aklile Solomon nanao izao fomba fanaraha-maso izao :
Amin'izao hafaliako izao hahita azy ireo afaka sy afa-miaraka indray amin'ireo olon-tiany dia tsy voatanako ny mieritreritra ny tena fahatsaran'ity vaovao ity. Vao navotsotra izy ireo, tsy misy fanazavana, tsy misy antony, tsy misy fanamarinana???? Nosintonin'ny Minisiteran'ny Fitsarana ny vesatra fiampangana izay midika fa mbola azo hiampangana azy ireo indray. Fiainana feno tahotra no hitako, tahotry ny tsy fantatra sy izay mety hitranga manaraka… Ahoana ireo sisa? Fa ahoana ny naha-hafa azy ireo?
Eskedar Alemu, rahavavin'i Reeyot Alemu, nizara sariny miaraka amin'ny rahavaviny ary mampiseho ny hafaliana tamin'ny fisaorana ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanentanana ho famotsorana azy:
Mihiratra tanteraka ny androko faly aho fa ny ahy rehetra sady rahavaviko dia eto akaikiko, tsy izaho irery no mizara izany hafaliako izany fa ireo izay miahy fatratra azy ihany koa ary ny tena mampitombo ny fifaliako dia ny nanafahana ihany koa an'i Mahlet,Edom,Tesfalem,Zelalem ary Asmamaw ary manantenafa ho afahana ihany koa ny ambiny ary isaorana Andriamanitra
Maro ny tombatombana manodidina ny antom-pamotsorana. Misy ny sasantsasany mandresy lahatra fa ny famotsorana azy ireo dia nipongatra avy amin'ny fikasana fitsidihan'n'ny filoha Obama ny firenena amin'ity volana ity. Maneso ny fihetsiky ny governemanta i Alemayehu:
tahaka ny tahotra Obama [Obamascare] avy amin'ilay Fiahiana Obama [Obamacare] malaza.
Temesgen Feseha nanamarika:
Leo tamin'ity resaka fientanentanana tsy mahazatra amin'ity fitsidihan'i Obama ho avy ity aho. Heverina hihidy tanteraka ny tanàna mba hampilamina ny fitsidihany. Saingy taorian'ny nandrenesana fa navotsotra ny sasantsasany tamin'ireo blaogera sy mpanao gazety dia nieritreritra aho fa nilaina ilay izy. Ankehitriny manantena aho fa ho avy isan-taona ny filohan'i Etazonia. Isam-bolana raha tsy sahirana izy. Na miteny hoe ho avy izy na dia tsy ho avy aza.
Samuel Gebru tsy resy lahatra fa ny fitsidihan'ny Filoha Obama no nanafaingana ny famotsorana azy ireo :
Mipetraka tsotra, fahadalana sy tsy misy fototra ny fiampangana fampihorohoroana ireo mpanao gazety tahaka an'i Tesfalem Waldyes sy Reeyot Alemu ho fanombohana saingy aza diso fihevitra, tsy misy ifandraisany amin'ny fitsidihan'ny Filoha Obama ho avy io ny famotsorana azy ireo.
Misy ireo sasantsasany manombana fa ny famotsorana dia mety misy ifandraisany amin'ny Valandresaka Momba ny Famatsiam-bola ho amin'ny Fampandrosoana (#FFD3) tohanan'ny Firenena Mikambana, izay tontosaina ao Addis Ababa. Jomanex, namana akaikin'ny vondrona Zone9,
Fampandrosoana ao anatin'ny jadona no “fanambinan'ny” olona vitsivitsy, Ohatra amin'izany i Ethiopia.
Ary mailaka i Mekdi G tamin'ny fanondroana ny fifanoherankevitra hita ao amin'ny fampandrosoana an'i Ethiopia:
— Mekdi_G 🙂 (@Mekdi_G) July 13, 2015
Raha tena miahy ho amin'ny fampandrosoana tokoa ianao dia atsaharo ny famonoana amin'ny anaran'ny fampihorohoroana ny nofinofin'ny tanora Ethiopiana